curls Golden efana yokuvuthwa ezindlebeni ... nobungane umuntu nomdlandla onamehlo aluhlaza, ukukhanya elikhazimulayo ukushisa ... isifiso njalo ngomsebenzi, ukulwela phambili ... uthando olungenamkhawulo izwe lakhe lwendabuko futhi noma yini ehlangene nakho ... esifushane, kodwa ukuphila ngendlela emangalisayo elikhanyayo zokudala ... micabango oyofika engqondweni ngaleso Ukukhuluma imbongi enegama akhanya - uSergei Yesenin. Imisebenzi yakhe bayazazi wonke umuntu isiRashiya, kuhlanganise labo ngokomthetho akanasithakazelo izinkondlo.
kudabuka kwakhe - Konstantinovo, edolobheni elincane elikulesi Ryazanschine. Russian imvelo acwebile futhi ubuhle balo esingakhulumekiyo phakade enhliziyweni yomntwana, a eyisithunjwa ngobukhulu bakhe, ekuqaleni Wakha kuye ukuthambekela versification. Lapho sengineminyaka engu-nesishiyagalombili ngesikhathi imbongi abasha kwakuyinqubo okwase kuyiminyaka umbuso notebook equkethe imisebenzi yakhe yokuqala. Esenina, uyithumele Petersburg nokwethembela ukuqashelwa okusheshayo, wamangala kakhulu ukuthi omagazini wedolobha abazange bavumele ke. Khona-ke wenza isiqunto mathupha besiya enkazimulweni. Futhi izinkumbulo ekhaya lakho siqu konke ukuphila kwakhe kuzosithinta umphefumulo wakhe futhi ugqozi Iminako yezinto ezintsha zokudala.
Petersburg, le nsizwa wabingelela ngokufudumele. "Goy wena, Russ, othandekayo wami ..." - lokhu kanye nezinye usebenza esenina umxhwele Blok, Gorodetsky, Klyuev kamuva. izinkondlo zakhe ayethwele injabulo ezwakala ngobuqotho futhi eyingqayizivele. Udumo Real ukuletha amaqoqo kuqala, okuyinto ekhishwa omunye ngemva komunye, "Radunica", "Goluben", "Izwe Encwadi Amahora", "Inguquko". Benza kakhulu yemvelo umkhiqizo esenina "Prunus", "Inyanga uphondo ifu zikagwayi", "Niva onomfutho ...", "ngangiphuma endlini othandekayo wami ..." kanye nabanye abaningi. Umfundi uvezwa ezweni ekhethekile lapho imvelo humanized bese uba umlingisi lomcoka. Lapha, konke liyavumelana, egqamile, olunothile akunakuzenzisa esivela kubantu.
Nge novalo nesisa Yesenin abasha libhekisela izilwane abonakala kakhulu ku "INgoma Inja", kubhekene ngokufa okudabukisayo nomdlwana osanda kuzalelwa.
Ibangelwa ukumangala futhi sithokozise jikelele izingathekiso engavamile, epithets, nokumadanisa "dada wahlamba ... ubumnyama", "obumbene lace amafu ..." futhi-ke, owaziwa "Russia -. Raspberry ensimini"
Izinguquko ezenzeka kuleli zwe, ngakho ekuqaleni beqonda injabulo. Yena exhumene inguquko "ashintshe" okufanele uhambe ukuze kusizakale abantu. Kulesi perild imisebenzi avele esenina "Ijuba laseJordani", "izigubhu wasezulwini", njll Nokho, ngokushesha kakhulu izinkondlo ithoni washintsha, futhi esikhundleni injabulo kaningi uzwakale amanothi dreary observation ngenxa ka izinguquko ezenzekayo kuleli zwe - imbongi ngokuya ubona "waphenduka ngokuphelele. ukuphila "- nenhlokomo ekuphileni kwakhe siqu. Ephelele kakhulu yile ndlela nawe ozizwa zazibonakala amaqoqo ekuqaleni 20 sika "Bavume ibhoklolo" futhi "eMoscow Thaberne." Futhi isimo sengqondo iba impikiswano: kwabanye, kusenzima ngumculi blue Russia, abanye - a axokozelayo kanye axokozelayo. Umahluko efanayo bubonakala amavesi iminyaka 21-24, kuhlanganise "Umlilo libhubhisa up blue", "Mina ngiyindlela imbongi lokugcina emaphandleni", "Angizisoli, ningabizi ...", "S'thandwa, hlala phansi eduze ..."
"Fun" - mhlawumbe umsebenzi edume kunazo esenina kusukela umjikelezo we-Moscow, okuxhunyanwa imicabango nemizwa imbongi. Kwakubonakala sengathi ufingqa ukuphila kwakhe kwangaphambili, ukwabelana nge umfundi obuseduze.
Ngokushesha kulandele ujwayele A. Duncan travel European. Ukuba kude nasekhaya, Sergey Aleksandrovich ukubukeka okusha ngaso ezweni labo. Manje yayigcwele ithemba futhi aphuphe ngaye ukukhonza lokhokho nabantu. Kwaba ngemva kokubuyela khona le nkondlo "Grove ..." lapho ekwindla ihlobene ukuphila komuntu, Liyindawo efudumele futhi ithenda "Incwadi kumama wami."
Akhuluma ngokuzokwenzeka Yesenin, umuntu akakwazi bayakhohlwa "Motifs Persian" yakhe. Babephefumulelwe uhambo eCaucasus, lapho Sergey Aleksandrovich kakhulu wawuzwa ngokujulile indlela kuyena emizini yabo. Imizwa oba nayo ngemva wazwakalisa, iphikisane expanses Russian ezikude imvelo Persian - iphupho ukuvakashela izwe futhi engakaze igcwaliseke. izinkondlo umjikelezo liyafana imidwebo, kulekelelwa imisindo bukhoma. Kodwa kule wobuciko olusankondlo kwaba izinkondlo uthando, kuhlanganise umsebenzi edume kunazo esenina kulolu chungechunge - "Shagane". Kuyinto Monologue aqondiswe Persian elikude, okungenza umbhali watshela innermost cabango ezweni lakhe bomdabu Ryazan ekuhlaleni kukhona intombazane.
"Usale kahle, umngane wami ..."
Ngala mazwi iqala inkondlo eyabhalwa imbongi ngaphambi kokufa kwakhe. Kunjengokulinda i Epitaph ukuthi imbongi ziqondiswe yena. Frank ozelwe nobuhlungu engqondweni isikhathi eside, le nkondlo, eqinisweni aze abe esenina yokuvalelisa ngempilo nabantu.
Komzimba womuntu: imisipha subclavian
Reality - ke ..? Onikeza isiko ubuntu kanye ohlukile?